डव्लुएचओमा जागिर गर्न गएकी स्वास्थ्य सचिव चौधरीलाई कारबाही गर्ने तयारी - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > डव्लुएचओमा जागिर गर्न गएकी स्वास्थ्य सचिव चौधरीलाई कारबाही गर्ने तयारी
January 30, 2020 January 30, 2020 GRISHI229
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल सरकारको सचिव रहेपनि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डव्लुएचओं)को भारतस्थित नयाँदिल्ली कार्यालयमा जागिर खाइरहेकी उनलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ । सरकारको सचिवले दुई तिर जागिर खाएको विषयमा सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिँदै विभागिय कारबाही गर्ने तयारी थालेको हो । विभागिय कारबाही गरे उनले निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने छैनन् ।
सचिव डा. चौधरीले दिएको राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन । यसअघि नै सरकारले चौधरीलाई राजीनामा स्वीकृत नगर्ने भनेर जबाफ दिइसकेको भनेपछि चौधरी अटेर गर्दै जागिर खाइरहेका छन् । यस मानेमा उनले सरकारको नियम उल्लंघन गरेकी छन् ।
चौधरी कानुनतः अझै नेपाल सरकारका सचिव हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनको नाम अझै हटाएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेबसाइटमा उनको तस्वीर सचिवका रुपमा राखिएको छ । तर उनी दिल्लीस्थित डब्लुएचओको पी ५ (सहसचिव) स्तरको जागिर खाइरहेकी छन् ।
नेपाल सरकारको सचिव भएपनि उनी सुविधाका लागि सहसचिवस्तरको जागिरमा रमाइरहेकी छन् । डब्लुएचओमा नाम निस्किएको केही समयपछि २०७६ कात्तिक १३ बाट लागू हुने गरी उनले राजीनामा दिएकी थिइन् । तर उनको राजीनामा सरकारले अस्वीकृत ग¥यो । उनले पुनः राजीनामा स्कीकृतीका लागि मंसिरको तेस्रो साता निवेदन दिएपनि त्यो हुन सकेन । राजीनामा स्वीकृत गर्नुको सट्टा विभागीय कारबाहीको तयारी थालिएको मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ । सचिव चौधरीले २०७६ कात्तिक १७ देखि डब्लुएचओको जागिर खाइरहेकी छन् ।